15 taona nanaovana asa fampivoarana eny amin’ny tontolo ambanivohitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Madagasikara dia firenena izay 3/4-n’ny mponina ao aminy no monina sy miaina any amin’ny tontolo ambanivohitra. Seha-pihariana mahasahana ny tontolo ambanivohitra izany no maro mpanao indrindra ary mamelona ireo orinasa mpanodina ny vokatra eto amin’ny firenena.
Ny mpanao raharaha an-tsaina (cabinet d’études) Madagascar Development (MADE) dia anisan’ireo sampan-draharaha mifototra amin’ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Sehatra maro no iandraiketany amin’izany : fampiofanana ny tantsaha amin’ny alalan’ny fambolena sy fiompiana ary ny fiarovana ny tontolo iainana ; fanomezana tolo-kevitra sy fahaiza-manao amin’ny alalan’ny fanarahana ireo zotram-pihariana toy ny fitantanana toeram-panomanana zana-kazo, findramam-bola ambanivohitra, fanajariana sy fananan-tany, fanajariana lakan-drano, fiarovana ny tanety.
Teknisiana maro no mifarimbona manatanteraka izany ary azo tsapain-tanana ny vokatra. Ireo mpiara-miasa sy mpiray ombon’antoka indray dia ahitana ireo mpisehatra rehetra amin’ny tontolo ambanivohitra sy ireo mpamatsy vola sy fitaovana avy eto an-toerana sy avy any ivelany.
Ireo toerana iasan’ny MADE dia saika manerana an’i Madagasikara fa ny tena misongadina dia ny Faritra Vakinankaratra, Menabe, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Analamanga, Itasy.
Mankalaza ny faha-15 taonany ny MADE amin’izao ary notanterahina ny desambra 2017 izany. Izay fotoana rehetra nolalovany izay dia nahitana fahombiazana teo amin’ny sehatra nandraisany anjara. Tsy nionona fotsiny teo amin’ny asa eny anivon’ny tantsaha fa hita taratra koa ny fandraisany andraikitra amin’ny sehatra fampiroboroboana ny tanan-dehibe izay famporisihina ny mponina an-drenivohitra hahay hampiasa ny toerana na tany ampiroboroboana an’ilay fambolena an-tanan-dehibe.
Fa fampandrosoana toa inona tokoa no sahaza ny tontolo ambanivohitra hananany fampandrosoana maharitra ?
Betsaka ny tetikasa sy fandaharan’asa nentina nampivoarana ny tontolo ambanivohitra tao anatin’ny taona maro. Tsy voatanisa intsony izy ireo ary vola tsy tambo ho isaina no nindramina sy notrosain’ny firenena hahatonga ny asa fihariana any ambanivohitra hisongadina sy hampiakatra ny fari-piainan’ny vahoaka tantsaha ary koa hampiakatra ny fiharian-karena faobe ho an’ny firenena. Raha zohina anefa ny zava-misy dia toy ny omaly tsy miova ihany, ny voka-bary zara raha mahavita telo na efa-bolana, ny làlana tsy azo aleha rehefa fahavaratra, ny vidin’ny masom-boly tsy natao ho an’ny tantsaha mahantra, zara raha miditra an-tsekoly ny zanaka tantsaha, ny fahasalamana tsy hay intsony fa dia zara aza misy renin-jaza sy mpitsabo nentim-paharazana.
Sao no tetika sy fomba fiasa mihitsy no tokony havaozina hifanaraka amin’ny fomba fiaina sy famokarana ?
Izay no fanamby hapetraky ny MADE amin’ny taona manaraka, dia ny hikaroka izay fomba fiasa mahomby ka hahatonga ny tantsaha tsy hiankin-doha amin’ny fanampiana avy amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany. Asa goavana izany ary mila finiavana na avy amin’ireo teknisiana sy sampan’asa maro miasa amin’ny sehatra ambanivohitra na indrindra koa avy amin’ny tantsaha izay mpisitraka ny asa atao. Ny fitondrana no tompon’antoka voalohany amin’izany koa mba hanamora ny fomba fiasa entin’ireo mpisehatra any ambanivohitra.
Ho lava velona ny mpisehatra rehetra amin’ny tontolo ambanivohitra.
Administrateur de MADE
Finances : BMOI et Orange Money s’unissent pour améliorer l’intégration financière - il y a 1 moi
Energie électrique : La lumière depuis 2014 fuit toujours - il y a 1 moi